Anigu waxaan ahay gabar jirta-14-sanno waxaana maqlay in gabdho kale oo iskuulka dhigta ay sameeyeen tallaalka HPV. Maxay tahay midaasi? Anigana miyaan u baahanahay? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir ah qoyskaygana waxay doonayaan in ay “gudniin igu sameeyaan”. Anigu waan cabsanayaa. Qoyskaygu ma maqlayaan warkayga. Qofkeen la hadli karaa?
Next Next post: Halkan dadku waxay inbaddan ka hadlaan galmada. Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah waxaana u malaynayaa in aysan qofna waxba ka galin. Maxay dadka oo dhan uga hadlaan waxyaabaha ku saabsan galmada?